Museveni ma ku guuleysan doonaa Madaxtinimadda Uganda 30-sanno kadib ? – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Museveni ma ku guuleysan doonaa Madaxtinimadda Uganda 30-sanno kadib ?
On Feb 18, 2016 Last updated Feb 18, 2016
15.3 million oo Muwaadiniin u dhalatay dalka Uganda waxay saakayto u dareereen inay doortaan Madaxweyne cusub, iyadoo ay xilkaasi ku tartamayaan 8 Musharax oo uu ku jiro Madaxweynaha haatan xilka haya ee Yoweeri Museveni.
Doorashaddan waxaan ka qeyb geli doonin Kala bar tirada guud ee Dadka Uganda oo lagu qiyaasay 34.9 million oo qof.
70% dadka Uganda kuma faraxsana Doorashadda, waxayna walaac xooggan ka qabaan Mustaqbalka Dalkooda, waana arrin la filan karo haddii Cod-bixinta la musuqmaasaqo.
28,010 goobood ayaa codka laga dhiibanayaa maanta, waxaana codbixinta loo qoondeeyey inay socoto muddo 9 saacadood, iyadoo goobaha Cod-bixinta albaabadda loo laabayo 04:00 galabnimo ee maanta.
Cod-bixinta ayaa la sheegay inay ku socoto si xawli ah, waxayna Taageerayaasha codkooda ugu deeqayaan hadba Musharaxa ay taageersan yihiin amaba ay isku Deegaanka yihiin.
Madaxweyne Yoweeri Museveni oo 71 jir ayaa waxa uu u xusul-duubayaa in mar kale la soo doorto, iyadoo aad loo hadal hayo inuu rajo wanaagsan ka leeyahay Natiijadda Doorashadda.
Museveni oo Halgan Jabhayan ah ku qabsaday Talada dalkaasi sannadkii 1986-kii waxa uu taageeradda ugu badan ka heli doonaa Ciiddanka oo iyagu rumeysan inuu isagu u qalmo Talada dalka.
Muddada 30-ka sanno ee uu hayo Talada dalkaasi waxay dadka Uganda ku naaloonayaan Nabad, wuxuuna Museveni gacan bir ah kaga hortagay Jabhadda Hubeysan ee Lord’s Ressistane Army (LRA) oo uu hoggaamiyo Jospeh Kony, kuwaasi oo ka dagaalami jirey Waqooyiga Uganda, balse loo itaal-sheegtay.
Dad badan ayaa rumeysan inuu Madaxweyne Museveni doonayo inuu ugu dambeyntii xilka kala wareego Wiilkiisa Muhoozi Kainerugaba oo haatan Taliye u ah Ciiddanka Khaaska ee Qaranka Uganda.
Hoggaamiyaha Mucaaradka, Dr. Kizza Besigye ayaa isagana safka hore kaga jira Loolanka Musharixiinta Madaxtinimadda, waana markii 4-aad ee uu isku soo taago Xilka Madaxtinimadda.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan in Madaxweyne Museveni dib loo soo dooran doono marka loo eego Shacbiyadda uu ku dhex leeyahay Dadkiisa iyo Hannaanka Hoggaankiisa ee Horumarka iyo Nabadda.
Waxa uu kasbaday Taageeradda Saraakiisha iyo Ciiddanka, kuwaasi oo uu ka ilaaliyey inay gadoodaan ama ay Fallaagoobaan, kadibna ay Dagaal Jabahadayn uga tuuraan Xilka uu ku naalloonayo.
Inta badan Saraakiisha Milliteriga waxa uu u madax bannaaneeyey Hawlahooda iyo isagoo inta badan Ciiddanka ku jiheeyey inuu u daabulo dalal kale, si ay Nabad-ilaaliyayaal u noqdaan.
Waxayna Ciiddanka ku qanacsan yihiin in loo diro Hawlaha Nabad-ilaalinta, gaar ahaan Hawlgalka AMISOM, iyadoo Askariga Uganda ee ka tirsan AMISOM mushaar ahaan loo siiyo 1,020-Dollar, taasi oo laba jibaar ka badan Kharajka ay qaataan Ciiddanka ka hawlgala gudaha Uganda.
Beesha Caalamka, gaar ahaan dalalka deriska ayaa iyagana indhaha ku haya Natiijadda Cod-bixinta Uganda, waxayna rumeysan yihiin in Madaxweyne Museveni dib loo soo dooran karo oo isagu Kaalin muuqata ka qaata Nabadda dalalka Afrika ee ay ka socdaan colaadaha hubeysan.
Waxa uu Ciiddamo Nabad-ilaalin u diray dalalka Somalia iyo Koonfurta Sudan, wuxuuna xiriir fiican la leeyahay Dowladaha Reer Galbeedka, inkastoo ay mucaaradaan Siyaasadiisa Keli-talisnimadda ah.
Inta badan kama hor yimaado Siyaasadda Reer Galbeedka, walow uu ku gacan-sayray Sharci la doonayey inay Dadka isku Jinsiga ah inay is-guursadaan, iyadoo uu Madaxweynaha Maraykanka, Barack Obama ka gilgishay go’aanka uu Museveni ku mamnuucay inay is-guursadaan dadka isku Jinsiga ah.
Dowladaha Reer Galbeedka ma jecla in mar kale Museveni la soo doorto, balse waxay ku khasban yihiin inay raacaan Rabitaanka Dadka Uganda iyo Natiijadda ka soo baxda Doorashadda Madaxtinimadda ee dalkaasi.
Madaxweyne Museveni ayaa ku mintidaya xilkaasi, wuxuuna ka midd yahay Madaxda fara-ku-tiriska ee Qaaradda Afrika ee muddada dheer ku dhegan Xukunka iyo Talada dalalkooda.
Saddexda Madaxweyne ee tusaalaha loo soo qaadan karo Madaxda Xukun-jacaylka ee muddada dheer xilalka haya Madaxweynayaasha dalalka:-
Angola, Edwardo dos Santos,oo xilka hayey tan iyo sannadkii 1979-kii.
Zimbabwe, Robert Mugabi, oo xilka hayey tan iyo sannadkii 1980-kii,
Equatorial Guinea, Teodoro Obinang oo xilka hayey ilaa sannadki i1979-kii.
Kaamiruun, Paul Biya, oo xilka hayey tan iyo sannadkii 1982-kii
Si kastaba ha ahaatee, su’aasha la isweydiinayo ayaa ah Yoweeri Museveni ma ku guuleysan doonaa Madaxtinimadda Uganda 30-sanno kadib ?
Raila Odinga oo ugu baaqay Dowladda Kenya inay shaaciyaan Tiradda Askartii ay Alshabaab ku dileen weerarkii Ceel-cadde.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo cambaareyay weerarkii ka dhacay Ankara, tacsina u diray Madaxweynaha Turkiga